Abantu ababini babulawa kukudubula kweHyatt Ziva Riviera Cancun
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Abantu ababini babulawa kukudubula kweHyatt Ziva Riviera Cancun
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • ulwaphulo-mthetho • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • abantu • Resorts • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abantu ababini babulawa kukudubula kweHyatt Ziva Riviera Cancun.
Unobhala weSizwe woKhuseleko loLuntu kwiphondo laseQuintana Roo uthe abantu ababini “ekucingelwa ukuba bangabathengisi beziyobisi” babulewe kodwa bongeza ngelithi akukho bakhenkethi bonzakele ngokumasikizi okanye baxhwilwe.
Ukudubula kuxelwe kwindawo yehotele ye-5-star Cancun ngoLwesine emva kwemini.
Iindwendwe ekuchithelwa kuzo iiholide zabalekiselwa ekuzifihleni ngabasebenzi bakwaHyatt Ziva Riviera Cancun phakathi kweengxelo zokudubulana.
Iindaba zaseMexico zanikela ingxelo yokuba omnye umkhenkethi uye wanyangwa “umonzakalo omncinane” ongachazwanga emva kweso siganeko.
Ukudubula kwabikwa kwindawo ekufutshane neenkwenkwezi ezi-5 IHyatt Ziva Riviera Cancun ngena Mekhsikho emva kwemini ngoLwesine.
Ngokweengxelo eziphikisanayo, umntu ophethe umpu okanye oxhobileyo waya kwindawo yokuchithela iiholide, indawo ethandwa ngabakhenkethi baseMelika, esuka kunxweme olumelene nolwandle waza waqalisa ukudubula.
Iindwendwe kunye nabasebenzi baye babalekiselwa ekufihlweni ngabasebenzi phakathi kweengxelo zokudubula.
Iindwendwe ezothukileyo zichaze indoda enye ebetha umpu esondela kwindawo ekuchithelwa kuyo iholide engasese esuka elunxwemeni yavula imbumbulu phakathi komdlalo webhola yevoli. Kukwakho neengxelo zokuba umdubuli okanye abadubuli bebephethe “imipu yomatshini” njengoko besihla kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
Ubuncinci ababini abarhanelwa ngamalungu emigulukudu babulawa kukudubulana, i-State Secretariat of Public Security in Mekhsikho's isimo Quintana Roo uthe.
Ngokutsho kwamagosa karhulumente, abantu ababini “ekucingelwa ukuba bangabathengisi beziyobisi” babulawa kodwa akukho bakhenkethi benzakala ngokumasikizi okanye baxhwilwa.
Igqwetha likarhulumente lithe emva kwexesha laqinisekisa ukuba esi sehlo ibikukudutyulwa kwamaqela emigewu, lisithi senzeke kulwandle olukumganyana ukusuka kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
Ngokweengxelo zeendaba zasekuhlaleni, omnye umkhenkethi uye wanyangelwa “ukwenzakala okungephi” okungachazwanga emva kweso siganeko.
Kwisithuba esingangeyure emva kokudubulana, iindwendwe zavunyelwa ukuba zibuyele kwindawo yolwamkelo ehotele.
Isithethi se Hyatt Ziva Riviera eCancun bathi abasebenzi basehotele “bathethathethana ngoko nangoko nabasemagunyeni basekhaya” ekuthiwa bakwindawo yexhwayelo bephanda.
Uzakuzo wase-US kwi Mekhsikho ithe ibijonga iingxelo zodutyulo.
Ukudubula kweqela lemigulukudu kwenye indawo edumileyo yaseTulum, malunga neekhilomitha ezingama-80 kumazantsi eCancun, kushiye abakhenkethi ababini bangaphandle befile kwaye abanye abathathu benzakele kwinyanga ephelileyo, emva koko imikhosi yokhuseleko yaseMexico yathunyelwa ukuba ixhase abasemagunyeni basekhaya.
Kulandele umtya weziganeko ezinxulumene nemigulukudu kummandla, kuquka ukubulawa ipolisa kwidolophu ekufutshane Playa del Carmen ekupheleni Okthobha.